Google Analytics qaybaha - Imtixaanka xajmiga ah
Marka ay timaado in laga wada hadlo baarista Google ee dadka kale, waa inaad maqashay "Waxaan raadinayay talooyin," "Marnaba ma isticmaalin falanqaynta Google," iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Artem Abgarian, khabiirka Sare khabiir, ayaa sheegaya in ay muhiim tahay in la isticmaalo qaybaha Google Analytics haddii aad rabto inaad hesho tiro ku filan oo marti u ah boggaaga.
Waa maxay qaybta?
Google Analytics, qaybta waa nooc gaar ah oo xog ama farsamo oo ku siinaya fikrad ah tayada gaadiidkaaga - umzug firma. Falanqaynta Google waxay na siineysaa fursado badan oo lagu hormarin karo waxqabadka guud ee goobta iyo kulannada iyo sidoo kale heerka sare ee isticmaalaha. Haddii aad rabto inaad fikrad ka hesho nooca boggaga ama maqaallada ay ku helayaan aragtiyo badan iyo inta badan aragtidaada noolahaaga ku yaala, waa inaad samaysaa adigoo isticmaalaya qeybaha GA. Taasi waxay sidoo kale kaa caawineysaa inaad xoojiso xogtaada si aad u hesho natiijooyin gaar ah oo aad u fiican oo ka badan sidii hore.
Maxaad ugu baahantahay qaybo?
Aan halkan kuu sheego in boggaaga iyo xogtaada aan la ilaalin karin ama si habboon loo ururin karo iyadoon kala qaybin. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad soo qaadato gabagabadii saxda ahayd. Khabiiradu waxay yiraahdaan dhammaan xogta iyo macluumaadka wadajirka ah waa mid liidata, markaa waa inaad heshaa kala-qaybsanaan. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad hubiso tayada booqdayaasha goobtaaga, waa inaad kala qaybisaa Google Analytics iyo xogaheeda qaybaha iyo abuurto shaandheyn ku haboon..Xogtaasi waa mid si buuxda loo soo ururiyey oo aanad ku dhisi karin istaraatejiyad aan lahayn kala qaybsanaan habboon. Waxaad sii wadi kartaa kobcinta boggaga internetka iyo waxyaabaha internetka ah, laakiin ma jirto isticmaalka maadaama aadan rabin inaad iibsato wax iibsasho ama isticmaalo adeegsi.
Sidee loo abuuraa qayb ka mid ah Google Analytics?
Haddii aad rabto inaad qayb ka sameysid qaybta Google Analytics, waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa isbeddelka filtarrada oo dib u habeyn ku saleysan dabeecadda goobtaada. Aan halkan kuu sheego in qaybaha ay fududahay in wax laga beddelo, tirtiro ama dib loo magacaabo, laakiin kama bixi kartid xogta dhabta ah maxaa yeelay taasi waxay waxyeelleyn kartaa boggaga internetka oo dhan. Qaar badan oo naga mid ah, waligeed lagama maarmaan in la abuuro qaybo, laakiin iyada oo aan la xaqiijin karin helitaanka gaadiid tayo leh oo ka socda raadiyaha raadinta .
Waxaa jira laba nooc oo kala duwan, qaybo nidaamsan, iyo qaybo gaar ah. Qaybaha nidaamku waa kuwa bixiya muuqaalada iyo ikhtiyaari go'an oo ku jira Google Analytics oo aan la beddeli karin markii la abuuray. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku habboonaan karaan boggaga degganaasha iyo weliba qaababka warbaahinta bulshada. Qeybaha nidaamku waa kuwo waxtar leh maaddaama ay yihiin mobile-ka saaxiibtinimo oo aad ka heli karto aragtiyo badan oo ka socda qalab mobile. Qeybaha gaarka ah waa kuwo aad u caan ah oo aan ka yareynin qaybaha nidaamka. Waxay sidoo kale bixiyaan fursado kala duwan si ay u doortaan Google Analytics. Tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa qeybaha kala soocaya kuwa soo booqda kuwaas oo ku qaadanaya wax ka yar soddon il biriqsi oo ku yaal boggaaga. Waxa kale oo suurtagal ah in la abuuro qaybo si aad u hesho aragtiyo dalka ku salaysan oo ku saabsan bogaggaaga. Dhammaan tani waxay hagaajin doontaa guud ahaan waxqabadka guud ee goobtaada, tayada gaadiidkaagu wuxuu kor u qaadi doonaa gebi ahaanba.